सबैको मुखमै झुन्डिएको गुर्जाे के हो? यसले के गर्छ, कसरी खाने?
अनिता श्रेष्ठ काठमाडौं - मंगलबार, भदौ २३, २०७७
सिन्धुपाल्चाेकका स्थानीयले जंगलबाट संकलन गरेको गुर्जाे।
चितवनमा कार्यरत डा. विश्वबन्धु बगाले ‘एलोपेथिक’ चिकित्सक हुन्।
उनी र उनका परिवारका सदस्यलाई गत महिना कोरोना भाइरस संक्रमण भएको थियो।
त्यसबेला आफन्त र साथीभाइले उनलाई ‘गुर्जाे’ खान सल्लाह दिए। घरमै ल्याएर राखिदिए।
र, उनले अहिलेसम्म पनि गुर्जाे खाइरहेका छन्।
‘तर, यही गुर्जाे खाएर मलाई ठिक भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन,’ डा. बगालेले आयोमेलसँग भने, ‘यसले इम्युनिटी बुस्ट गर्छ भन्नेसम्म मैले इन्टरनेटमा पढेको हो।’
कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै नेपालीको मुखैमा झुन्डिएको एउटा नाम हो– गुर्जाे।
अरू बेला सायदै नेपालीले गुर्जाे सुनेका थिए। अझै त्योभन्दा पनि धेरै कमले मात्रै गुर्जाे चिनेका वा देखेका थिए।
तर, गुर्जाे नेपाली डाँडापाखामा पाइने एक आदिम ‘बुटी’ हो।
गुर्जाे कसरी एकाएक चर्चामा आयो?
लगभग पूरै विश्व कोरोना संक्रमणले थलिएको छ। नेपालमा पनि दिनदिनै यसको संक्रमण बढिरहेको छ।
न, यसको कुनै औषधी बनिसकेको छ न कुनै उपचार विधि। यसको रूपरङ अनि आकार–प्रकार र बानी–बेहोराबारे पनि अहिले विभिन्न तरिकाले आइरहेका छन्।
तर, ठ्याक्कै यकिन गरेर भन्नुपर्दा यो भाइरस एक रहस्यमयी बनिरहेको छ।
भाइरस आफूमा सर्न नदिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। तर, भाइरस प्रवेश गरिहाल्यो भने?
त्यसपछि सबैभन्दा चाहिने महत्वपूर्ण कुरा भनेको ‘शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता’ अर्थात् इम्युनिटी पावर बलियो हुनु नै हो।
यही सन्दर्भमा गुर्जाे चर्चामा आयो। अर्थात्, गुर्जाेले शरीरको त्यो इम्युनिटी पावरलाई बढाइदिन्छ।
‘यसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाइदिन्छ,’ नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय कीर्तिपुरका निर्देशक डा. प्रदिप केसी भन्छन्, ‘कुनै पनि भाइरसका लागि यसले एन्टिभाइरसको काम गर्छ। अर्थात्, भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाइदिन्छ।’
उनका अनुसार गुर्जाेको प्रयोग भने परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको छ।
‘हामी हुर्केको वातावरणमा पहिलेदेखि नै विभिन्न प्रकारका भाइस थिए, जसका कारण रुघा, खोकी, ज्वरो जस्ता रोग मौसमअनुरूप लागिरहन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘परापूर्वकालदेखि नै मानिसले गुर्जाेको प्रयोग गर्दै आएका छन्।’
गुर्जाे कहाँ पाइन्छ?
यो हिमालदेखि तराईका चुरे जंगलमा समेत पाइन्छ। तर, ठाउँअनुसार यसको आकार, प्रकार फरक–फरक हुन्छ।
पहाडतिर त मानिसले पशुलाई घाँसको रूपमा पनि खुवाउँछन्। मानिसलाई मात्रै होइन, खेतबारी जोत्ने गोरुलाई पनि गुर्जाे खुवाउने चलन थियो।
गुर्जाे समुद्री सतहबाट ३ सय मिटर उचाइदेखि नै पाइन्छ। खासमा यो एक लहरा प्रजातिको वनस्पती हो।
तराईको चुरे क्षेत्रमा पाइने गुर्जाे सामान्य पानको पातजस्तै हुन्छ। यसको डाँठ फुस्रो हुन्छ र स–साना गाँठा हुन्छन्।
त्यस्तै मध्यपहाडका महाभारत पर्वतहरूमा अलि कालो डाँठ भएको गुर्जाे पाइन्छ। यो सामान्य खालको भन्दा अलि प्रभावकारी हुन्छ।
र, हिमाली भेगको सेपिलो क्षेत्रमा पाइने गुर्जाे अझै प्रभावकारी हुन्छ। गाने गुर्जाेको नामले पनि चिनिने यो गुर्जाेको ‘राजा’ पनि मानिन्छ। यसका डाँठमा हल्का काँडा हुन्छन्।
संस्कृतमा यसलाई ‘अमृता’ पनि भनिन्छ। र, वैज्ञानिक नाम ‘टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया’ हो।
गुर्जाेले के गर्छ? कसरी खाने?
मानिसमा एउटा भ्रम छ- यसले कोरोना निको पार्छ। तर, यो सही होइन।
यसले कोरोना निको त पार्दैन तर, त्यो भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमतामात्रै बढाउँछ।
किनकि, गुर्जाेको डाँठमा ‘एन्टिबायोटिक’ र ‘एन्टिब्याक्टेरियल’ अर्थात् ब्याक्टेरिया मार्न सक्ने गुण हुन्छन्।
‘यो कोरोना निको पार्ने औषधी होइन, मानिसमा यसको भ्रम छ,’ डा. केसी भन्छन्, ‘गुर्जाेले रोगसँग लड्ने क्षमता (इम्युनिटी) मात्रै बढाउँछ।’
यो जडीबुटीको पात पहेँलो भएर झरेपछि मात्र यसको लहरे डाँठलाई औषधिको प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। मानिसले हरियो पातलाई प्रयोग गर्दछन् जुन गलत हो।
गुर्जोको डाँठ जता फाले पनि उम्रिन सक्छ र कहिल्यै नमर्ने भएका कारण पनि यसलाई अमृता भनिएको बताउँछन् डा. हरिदेव यादव।
यसको विरुवा लहरा बनाएर अन्य बोटको सहायता लिएर चढ्ने गर्छ। यो सेवन गर्दा निकै तीतो हुन्छ।
आयुर्वेदिक भाषामा जडीबुटी जति तीतो हुन्छ, स्वथ्यलाई त्यति नै फाइदा पुर्‌याउँछ।
गुर्जाेको लहरा तीतो हुने बोटकै सहायताले माथि चढे त्यसको औषधिको महत्व झनै हुने बताउँछन् डा. यादव। गुर्जोको सबै बोटलाई खान मिल्छ तर यसको डाँठ औषधिको लागि धेरै उपयुक्त हुन्छ।
एलोपेथीमा ब्याक्टेरिया, फङ्गस र भाइरसका लागि छुट्टै औषधी हुन्छ भने आयुर्वेद (होमिओपेथी) मा गुर्जो नै यी सबै जीवाणुको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ।
यादवका अनुसार यसले प्रदुषित रगतलाई शुद्ध पार्छ। यसको रसले सुगर र प्रेसरलाई धेरै फाइदा पुर्‌याउँछ। त्यस्तै घाउ निको बनाउने, झाडा पखाला रोक्ने र शरीरलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
नियमित सेवनका लागि सामान्यतयाः यसको सुकेको डाँठ पिसेर धुलो पार्ने, अनि त्यसलाई पानीमा भिजाउने र बिहानै खाली पेटमा त्यो पानी पिउने हो।
गुर्जाे किन्न पैसा लाग्छ?
सरकारी आयुर्वेद चिकित्सालयहरूमा गुर्जाेको पैसा तिर्नुपर्दैन।
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा पनि यो निःशुल्क पाइन्छ। डा. केसीका अनुसार त्यहाँबाट दैनिक ३–४ सय मानिसले निःशुल्क गुर्जाे लैजान्छन्।
सरकारले हरेक वर्ष आयुर्वेद औषधी उत्पादन गर्न अनुदान दिन्छ।
‘हामीले १२ वटा जडीबुटी, ज्येष्ठ बासादी, एसथ्री मधु र गुणुची, समिश्रण गरेर औषधि बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो निःशुल्क पाइन्छ। यसले ज्वरो, रुघाखोकीलाई निको बनाउन मद्दत गर्दछ।’
यस्ता औषधी बनाउनका लागि सरकारले हरेक वर्ष यो चिकित्सालयलाई ३० लाखजति अनुदान दिन्छ। त्यही पैसाले जडिबुटी खरिद गरेर यो औषधी बनाइन्छ।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै बजारमा आजकल तरकारी जस्तै गुर्जाे पनि बिक्री भइरहेको छ। जंगलबाट खोजेर, जो पायो उसैले अहिले बजारमा गुर्जाे बेचिरहेका छन्।
डा. कार्कीका अनुसार यो सरासर गलत छ। त्यसरी बजारमा बेच्न राखिएका गुर्जाे सेवन गर्नु पनि हुँदैन किनकि ती वनस्पती साँच्चिकै गुर्जाे हो कि होइन भनेर प्रमाणित हुँदैन।
उनका अनुसार आर्युवेदिक औषधी तयार पार्ने देशैभरि १० वटा उद्योग छन्। ती औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन्।
गुर्जाेलगायत विभिन्न मिश्रित जडिबुटी औषधी उनीहरूले उत्पादन गर्दै आएका छन्।
नेपालमा गुर्जाेको अध्ययन
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गुर्जोसहित केही जडीबुटीबारे सन् २०१६ मा एउटा अध्ययन गरेको थियो।
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरले अघिल्लो वर्षदेखिमात्रै यसको अनुसन्धान थालेको छ।
त्यसबाहेक गुर्जाेकै बारेमा नेपालमा कुनै अध्ययन वा अनुसन्धान भएका छैनन्।
तर, भारतमा भने यसको थुप्रै अध्ययन गरिएको पाइन्छ।
भारत सरकारले आयुर्वेदलाई मान्यता पनि दिएको छ।
‘तर, हाम्रोमा भने त्यस्तो कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै छैन,’ आर्युवेद डाक्टर यादव भन्छन्, ‘नेपालका लागि यो निकै ठूलो विडम्बना हो।’
गुर्जोका फाइदा :
रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ
यसले रोगसँग लड्न मद्दत पु¥याउँछ।
ज्वरो घटाउने काम र्गदछ
यो जडीबुटीले घरीघरी आउने ज्वरोलाई घटाउँछ भने डेंगु, स्वाइन फ्लु र मलेरियाको लक्षण र असर घटाउँछ।
पाचन शक्ति राम्रो बनाउने
गुर्जोले पाचन शक्तिलाई बढाउने काम गर्दछ। आधा ग्राम गुर्जो पाउडर र अमला मिसाएर हरेक दिन खाए कब्जियतको समस्या हट्छ।
डाइबिटिजका बिरामीलाई फाइदा पुर्‌याउँछ
यो जडीबुटीले चिनीको मात्रा धेरै घटाउन मद्दत गर्दछ। यो टाइप टुका बिरामीलाई उपयुक्त छ।
रिस र तनाव घटाउँछ
यसले मानसिक तनाव र रिस घटाउँछ भने शरीरको नकरात्मक सोच घटाएर शान्त बस्न र स्मरण शक्ति बढाउँछ।
स्वासप्रश्वासको समस्यामा लड्न मद्दत गर्छ
स्वासप्रश्वासका समस्या जस्तै, रुघा, खोकी, टन्सिललगायत कम गराउँछ।